Adeegsiga WordTracker si aad u dhisto Su'aashaada iyo Jawaabaha Mawduuca | Martech Zone
Talaado, Maarso 1, 2016 Douglas Karr
Waxaan bixinaa qalab badan oo aan ku falanqeyno macaamiisheenna waana sii tijaabineynaa xitaa inbadan. Mar kasta oo aan bilaabo istiraatiijiyad falanqeyn keyword keyword ah, hal aalad marwalba waa daruuri. Marar badan ma taabto bilo… badanaa waxaan u daayaa rukhsadda drop laakiin markaa…
WordTracker waa daruuri maxaa yeelay ma heli karo qalab kale oo leh su'aalo yaab leh oo kaladuwan oo dhammaystiran oo isticmaalayaasha raadiya ay raadiyaan agagaarka mowduuc kasta. Waan ka wada hadalnay dhismaha maktabad nuxurkeedu dhammaystiran yahay sumaddaada - oo laf dhabar u ah guusha maktabaddaas ayaa ka jawaabeysa su'aalaha ay isticmaaleyaasha mashiinka wax baara ay galayaan. Iyo, markii waqtigu sii socdo, adeegsadayaashu waxay ku sii kordhayaan hadallo badan codsiyadooda. Tani waa dahab dahab ah oo loogu talagalay wax kasta oo suuq geynaya oo raadinaya inay dhammaystiraan maktabadooda.
Gudaha buluugga buluugga ah WordTracker waa shaandho aad isticmaali karto si aad ugu darto ugana reebto shuruudaha, u dejiso mashiinka mugga mashiinka raadinta, ama - ugu caansan - shaandhaynta kaliya su'aalaha muhiimka ah. Kaliya isticmaal miiraha su'aalaha muhiimka ah, waxaana laguu soo bandhigay suugaan cajiib ah oo ka mid ah su'aalaha ugu caansan ee la baaray bishii la soo dhaafay.
Boom! Kani maahan mid qiimo leh sababta oo ah waxa dadku taariikh ahaan baareen, waxay sidoo kale ku siin kartaa tusaale shey kasta ama adeeg kasta oo macmiilku iibinayo. Tusaale ahaan, waxaan la shaqeyneynaa macmiilka elektaroonigga ah hadda oo ay ku jiraan in ka badan 10,000 alaab daawo ah oo ku jirta buugooda. Markaad jebiso qaabdhismeedka su'aasha, waxaan awoodnaa inaan aragno waxyaabaha ay tahay inaan ku siino bog kasta oo wax soo saar ah ama qodobbada keligood taagan si ay u noqdaan kuwo dhammaystiran:
Qeexid - Waa maxay [magaca wax soo saarka]?
Waxyaabaha ay ka kooban - Maxaa ku jira [magaca wax soo saarka]?
qiyaasta - Immisa [magaca magaca] ayaa loo baahan yahay si loo yareeyo [calaamadaha]?
Codsiga - Miyuu [magaca waxsoosaarku] nafisaa [astaamaha]
Calaamado - Sidee loo nafisaa [astaamaha]?
Hadda waxaan qaadan karnaa natiijadaas oo aan ku dabaqi karnaa mid kasta iyo alaab kasta oo ay iibiyaan si loo hubiyo inay leeyihiin maktabad nuxurkeedu dhammaystiran yahay.
Tags: su'aalaha muhiimka ahcilmi-baarista muhiimka ahsu'aalowordtracker
8 Talaabo oo Loo Qaado Istaraatijiyad Suuq-Ku-saleysan oo Ku-guuleysata